एजेन्सी । सँधैजसो तपाईले फिल्ममा या विभिन्न समयमा वकिलहरुलाई देख्नु भएको होला र तपाईलाई राम्रोसँग थाहा होला कि वकिल कालो कोट र सेतो शर्ट लगाउँछन् ।
तर के तपाईलाई थाहा छ किन वकिलले कालो कोट लगाउँछन् ? किन अरु रङका कोट लगाउँदैनन् ? यो कुनै फेसन नभई यसपछाडि एक रहस्य रहेको छ । त्यसको बारेमा चर्चा गरौं ।
वकालतको सुरुवात वर्ष १३२७ मा एडवर्ड तृतीयले गरेका थिए र त्यस समय ड्रेस कोडको आधारमा न्यायधीशको भेषभुषा तयार गरिएको थियो । त्यस समय जजले आफ्नो सीरमा एक कपालवाला विग लगाउँथे । वकालतको सुरुवाती समयमा वकिल ४ भागमा बाँडिएका थिए जुन यसप्रकार थिए । स्टुडेन्ट (छात्र), प्लीडर (वकिल), बेन्चर र बेरिस्टर ।
यी सबैले जजको स्वागत गर्दथे । त्यस समय अदालतमा सुनौलो रातो कपडा र खैरो रङबाट बनेको गाउन लगाइन्थ्यो । त्यसपछि वर्ष १६०० मा वकिलहरुको भेषभूषामा परिवर्तन आयो । १६३७ मा यस्तो प्रस्ताव राखियो कि काउन्सिललाई जनताको अनुरुपनै कपडा लगाउनुपर्छ । त्यसपछि वकिलहरुले लामो गाउन लगाउन सुरु गरे ।
त्यस समय मानिन्थ्यो कि उनीहरुको भेषभूषाले न्यायधीश र वकिलहरुलाई फरक देखाउँथ्यो । सन् १६९४ मा बेलायती महारानी क्वीन म्यारीको दादुरा रोगले मृत्यु भयो । जसमा उनका पति राजा विलियम्सले सबै न्यायधीश र वकिललाई सार्वजनिक रुपमा शोक मनाउनका लागि कालो गाउन लगाएर एकजुट हुन आदेश दिए ।
यस आदेशलाई कहिल्यै पनि रद्द गरिएन, जसकारण आजसम्म पनि यो प्रथा चलिआएको छ कि वकिल कालो गाउन लगाउँछन् । अब त कालो कोट वकिलहरुको पहिचान बनेको छ । मान्ने गरिन्छ कि कालो कोट र सेतो शर्ट वकिलहरुलाई अनुशासनमा राख्दछ र उनीहरुमा न्याप्रति विश्वास जगाउँछ ।
कालो कोट र सेतो शर्ट